ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 48.2 ပါရာစီတမော- အရည်တစ်ရာဖိုး
စာရေးကောင်းတဲ့ ဘလောက်ဂါတွေ စာမရေးကြတဲ့အထဲ
ရှင်နည်းရာ အဂ္ဂလူထွက် ဘကျောက်က ဆုံးတယ် ။ အခု အစ်ကိုပြန်ရေးလာတာတွေ့ရတော့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ။
တစ်နှစ်နီးပါး ဆိုတော့ ရေးစရာတွေ အများကြီး ပါလာမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်ဗျာ ။
Sight!! I hope it's not true story.
ကိုရင်ငြိမ်း ပြောတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ ကိုနဗန ရေ
အပြင်မှာ ဒါမျိုး တကယ်မရှိပါစေနဲ့ ၊ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ဗျာ။
စာတွေ ပြန်ရေးလို့ဝမ်းသာလိုက်တာ။ အကို့ ဘလော့တခုလုံး ဖတ်ပြီးပြီ။ အားပေးလျက်ပါ။